Li Tim-Oi Foundation-Rev Dr Florence Li Tim-Oi
Juliet Wabwire kwuru
Oge ngwụcha maka ngwa maka nzukọ Maachị 2022 agafeela ugbu a.
A gaghị atụle akwụkwọ anamachọihe ọhụrụ ruo June/Julaị na njedebe maka ngwa bụ Mee 20th.
Biko jide n'aka na ị gụrụ akwụkwọ ọhụrụ maka enyemaka nke ọma tupu itinye akwụkwọ.
Ngwurugwu Li Tim-Oi di iji nyere ndi nwanyi Kristian aka dika ndi nnochi anya.
Ọ na - enye ndị na - azọ ọkwa ụwa abụọ na ụzọ atọ ka ha nye ọzụzụ maka ozi na ọrụ aka n'obodo ha. Akụkọ ha bụ ihe na-akpali ụwa niile
WERE OBARA OLEE
Li Tim Oi Foundation na-arụkọ ọrụ na St Augustine's Foundation nke bụ ọrụ enyemaka na-enye onyinye nke na-achọ ime ka ikike mmụta mmụta okpukpe nke ógbè Angionan Communion, ọkachasị n'ụwa nke ka ukwuu. Ọ na -eme nke a site n'inye onyinye dị iche iche nye ụlọ ọrụ [ógbè, dioceses, na ụlọ akwụkwọ nkà mmụta okpukpe] na ndị mmadụ n'otu n'otu. Enwere ike ịchọta nkọwa ndị ọzọ gbasara ụzọ St Augustine si eme nke a Webụsaịtị ntọala.
Mgbe Li Tim-Oi chọrọ ịmụ maka ozi ahụ, ezinụlọ ya enweghị ike ịkwụ ụgwọ ihe ọmụmụ ahụ na Union Theological College dị na Guangzhou [mgbe ahụ Canton]. Ndị ọzọ nyere ya ego iji mee nke ahụ. Na ebe nchekwa ya, nwanne ya nwanyị Rita mejuputara mgbapụta nke Foundation, ka a wee zụọ ụmụ nwanyị Christian ndị ọzọ na ụwa abụọ ụzọ atọ ka ha zụọ aka ọrụ ha. Ha na-akpọ onwe ha Ughmụ nwanyị Li Tim-Oi. Gụ akụkọ banyere ụfọdụ n'ime ụmụ nwanyị 450 nyeere ha aka ịmalite mmụta. Ha niile gosiri nke ahụ Ọ na-ewe otu nwanyị.
A na-achọ onyinye na ihe aka ọrụ iji mee ka ọrụ a gaa n'ihu.
Ntọala ahụ na-echeta ndụ na ozi Revd Dr Florence Li Tim-Oi bụ onye e mere 'estkọchukwu na Churchka Chukwu' na 25 Jenụwarị 1944. Nke a mere ka ọ bụrụ nwanyị mbụ e chiri echichi n'ime ọgbakọ Anglịkan.
More Banyere Lim Tim-Oi
31 Ọkt, 20
O wutere anyị mgbe anyị nwetara onyinye pụrụ iche…
Anyị nwere obi ekele kachasị nye Margaret, onye e chiri echichi dikọn a mara mma ma…
More ekele bụ n'ihi na anyị onwe anyị Canon Christopher Hall, onye bụ…
“Nke a bụ iji gosipụta ekele m na ekele gị maka ịhụnanya, nkwado na nnukwu nchekasị Ndị Kraịst maka m. Daalụ maka ịgọzi m ịgọzi ndị ọzọ, maka inye m ike nke ndị ọzọ, yana inye m echiche nke ruru eru na nsọpụrụ dị ka nwanyị. ”
Rev. Susan Ameso Kampala, Uganda
"Anyị na-eme ememe ọrụ na-agbanwe ndụ nke Foundation guzobere aha Li Tim-Oi, na-enye akụrụngwa maka agụmakwụkwọ nke nyeere ọtụtụ narị ụmụ nwanyị aka ịza oku Chineke na ndụ ha ma bụrụ ndị na-agbanwe mgbanwe na obodo ha, na ebe N'oge anyị ebe a na-adịghị asọpụrụ ụmụ nwanyị dị ka Chineke ga-akwanyere ha. ”
The right Rev Libby Lane Bishọp nke Stockport:
"Anyị na-eche Li Tim-Oi dị ka ada nke Nzukọ nke Hong Kong Na ndụ narị narị ndị nwanyị nyeere ya aka imezu oru ha iji jeere Chineke anyị ozi. "
Kachasị Rev Paul Kwong, Archbishop nke Hong Kong
itinye maka enyemaka
Izipu ozi ịntanetị pụtara na anyị ga-enwe ike iji ọtụtụ akụ anyị iji kwado ọtụtụ ụmụ nwanyị.